Waa maxay Semalt
Dammaanadda Guusha: La kulan Kooxda; Eeg Kiisaska Macmiilka iyo Markhaatiga Macmiilka
Semalt iyo Caalamka
Xaqiiqada madaddaalada ee ku saabsan Semalt
Maadaama ay tahay malaa'iga mas'uulka ka ah ganacsiyada waaweyn iyo kuwa yar yarba, shirkadaha, shirkadaha madaxa-bannaan, ganacsatada iyo hay'ado kale oo badan oo xiriir la leh internetka. Semalt waa hay'adda dijitaalka ah ee kaa caawinaysa inaad gaarto wixii aadan kaligaa iska saari karin iyada oo dammaanad lagu qanco marka guusha ganacsigaaga laga hadlayo.
Semalt waxay bixisaa adeegyo kala duwan oo ka bilaabma SEO ku takhasustay ee AutoSEO iyo FullSEO ilaa falanqaynta websaydhka, horumarinta Websaydh, iyo wax soo saarka Fiidiyowga. Semalt wuxuu ku siinayaa caawimaada ku habboon ganacsigaaga wuxuuna ku siinayaa dammaanadda 100% guusha adigoon walwal lahayn.
Semalt waa hay'ad dijital ah oo leh joogitaan caalami ah oo la shaqeeya koox la aqoonsan yahay oo karti u leh dhammaan aagagga iyo qaybaha naqshadeynta websaydhka, horumarinta webka, suuq geynta iyo aalado kale oo la xiriira ganacsiga internetka. Aalado ay ka mid yihiin SEO – AutoSEO iyo FullSEO, Web Analytics, iwm. Waxay hubiyaan in waxkasta ganacsiyada iyo milkiilayaasha ganacsiga ay u baahan yihiin dhammaantood si hufan looga taxadariyo.
Meheraddaadu miyuu ku yaal meel cidhiidhi ah ama dhibaato ka haysataa taraafikada websaydhka hoose iyo booqdayaasha? Miyaad qabtaa tartamo aad u xoog badan oo kaa xannibaya inaad ka gaadho darajooyinka ugu sareeya Google? Markaa ha ka baqin, halyeeygaaga Semalt ayaa halkan u jooga inuu badbaadiyo adiga iyo ganacsigaaga!
Semalt waa hay'ad xirfadle ah oo SEO ah iyo hay'ad suuq geyn oo ku siineysa adeegyo la aqoonsan yahay si looga takhaluso dhibaatooyinkaaga ganacsi ee ugu cabsida badan iyo kuwa suuq geynta ah. Tani waxay ku sameyneysaa iyada oo adeegyadeeda aan dhamaadka lahayn ee xirfadlayaal la caddeeyey oo u hibeeya ay ka dhigayaan guusha ganacsigaaga wax kasta oo kale oo ganacsigaaga ka dhiga heer sare.
Semalt, waxaad u taagan tahay inaad wax badan uga faa iideysato xirfadlayaal karti leh oo diyaar u ah in laga caawiyo sanadka oo dhan. Shirkadda ayaa sidoo kale leh heer sare oo heer sare ah oo ah kalsoonida macaamiisha iyada oo diiwaangelinta hay'adda ee mashaariicda la dhammaystiray ay burburinayso saqafka iyada oo ay jiraan in kabadan 800,000 mashruuc iyo 300,000 adeegsadeyaal ah.
Semalt waxay ku bixisaa adeegyo tayo leh oo aan tiro lahayn oo qiimo macquul ah iyo qiimo jaban leh isla markaana aan iloobin qiimo dhimis la yaab leh marwalba si diiran dhoola tus wajigaaga.
Tani iyo faa'iidooyin kale oo badan oo aad u taagan tahay inaad ka faa'iideysato markii aad xulato Semalt. Adeegyadan qaarkood waxaa ka mid ah:
Semalt wuxuu diiradda saarayaa bixinta xirfadleyaasha SEO-ga iyo adeegyada suuqgeynta ee AutoSEO, FullSEO, Falanqaynta Websaydhka, Soosaarka Fiidiyaha, iyo Horumarinta Websaydhada.
Waa maxay SEO - Kor u qaadista Mashiinka Raadinta ama SEO sida caadiga ah waxaa loogu yeeraa waa istiraatiijiyad suuq geyn websaydh oo ku lug leh geedi socodka kordhinta tirada iyo tayada taraafikada websaydh kasta. Tani waxay ku sameyneysaa iyada oo kordhineysa aragtida websaydhka ee adeegsadayaasha iyada oo loo marayo mashiinka raadinta.
Waa geedi socodka lagu helayo taraafikada dabiiciga ah websaydhada bartilmaameedka iyada oo la adeegsanayo ereyada muhiimka ah ee la bartilmaameedsado websaydhka si loo kordhiyo darajadiisa mashiinka raadinta.
Takhasuska istiraatiijiyadeed ee SEO ee Semalt wuxuu daboolayaa laba laamood oo adeegyo ah AutoSEO iyo FullSEO:
AutoSEO - Semalt's AutoSEO waxaa loogu talagalay ganacsiyada hadda baranaya waxyaabaha yaabka leh ee SEO iyo saamaynta ay ku leedahay iibinta.
Shirkadda 'AutoSEO', ganacsiyada noocaan ah ee cusub ee la soo bandhigay waxay kor u qaadi karaan websaydhadooda, hagaajin karaan aragtida websaydhka, soo jiidashada booqdayaasha cusub dabcan waxay kordhisaa joogitaanka ganacsiga ee internetka.
FullSEO- Semalt wuxuu siiyaa FullSEO dhagtaagayaasha istiraatiijiyadda adeegsiga SEO. Waxaa loogu talagalay ganacsiyada tijaabiyay SEO oo doonaya inay sii socdaan oo ay u helaan wax badan oo la mid ah ROI wanaagsan oo faa'iido leh, maalgashiga mustaqbalka ee suuqa, ku raaxaysta natiijooyinka muddada dheer iyo sidoo kale ballaarinta aaggooda SEO.
Waa maxay Falanqaynta Websaydhka: kani waa istaraatiijiyad suuq-geyn oo ku lug leh dhowr geeddi-socodyo adag oo ururinta, warbixinta, iyo falanqaynta xogta websaydh. Kaas oo markaa loo isticmaalo ujeedo kala duwan oo ah helitaanka degelka si loo go'aamiyo heerka guusha ama guul-darrooyinka himilooyinka bogga. Waxaa sidoo kale loo istcimaalay in la helo, oo la abuuro istiraatiijiyado lagu hubinayo heer horumar.
Falanqaynta websaydhka Semalt gebi ahaanba way ka duwan tahay adeegyada celceliska aad ku aragto meelo kale. Falanqeeyaha websaydhka Semalt wuxuu ka caawiyaa meheraddaada inay fahmaan waxkasta oo ku saabsan jawigiisa suuqa, iyadoo kormeer ballaaran oo suuq ah ay ku saabsan tahay la socoshada boggaaga, jagada aad tartameyso, iwm.
Waxay kaloo ka caawisaa ganacsatada inay helaan suuqyo cusub oo la heli karo iyo sidoo kale kuwo ku habboon ganacsiga. Intaa waxaa sii dheer, adeeggu sidoo kale wuxuu ka caawinayaa iyaga inay u beddelaan dhammaan dukumiintiyada lagama maarmaanka u ah iyo macluumaadka ku saabsan ganacsiga inay noqdaan PDF iyo Excel.
Adeegyo badan, waxaad u badan tahay inaad filato xad-gudub iyo in ka sarreeya qiimayaasha sareeya ee kugu kicin doona waqti la'aan. Si kastaba ha noqotee, adeegyada Semalt waa kuwo aad u awoodi kara inta badan dadka ama ganacsiyada.
Dhammaan adeegyada Semalt waxay la yimaadaan qiimeyaal macaamiil u-habboon oo runtii mudan in loo adeego sidoo kalena kaa caawiya sidii aad jeebkaaga ugu sii hayn lahayd. Semalt waxay sidoo kale bixisaa qiimo-dhimisyo ku saabsan qaar ka mid ah adeegyadooda waqti ka waqti ilaa waqti macaamiisheeda. Hubi sawirada hoose si aad u aragto qaar ka mid ah qiimo dhimista la heli karo.
Liiska qiimaha adeegyada Semalt
Semalt gebi ahaanba way ka duwan tahay wakaalado badan oo dijital ah oo halkaas ka jira. Waa shirkad heersare ah oo khatar ah, Hay'ad Dukaan Digital ah oo Buuxda oo aan ku siineynin tayo oo keliya marwalba laakiin waxay sidoo kale ku siinaysaa dammaanadda xagga hore ee guusha soo socota.
Si loo caddeeyo heerka ay ka go'an tahay iyo sharcinnimadiisa, ma aha inaad kaliya kula kulanto kooxda Semalt websaydhka, laakiin sidoo kale waxaad arkaysaa kiisaska macmiilka oo caddaynaya heerkooda guusha dhammaantood.
La kulan kooxda Semalt oo ogow sida ay u shaqeeyaan.
Gaaritaankooda adduunka, Semalt wuxuu ku faanayaa guul dhinacyo badan oo leh kiisas macaamiil aan la tirin karin. Markhaatiyadan waxaa loo heli karaa ganacsatada kale inay dhex maraan iyagoo sugaya dacwadooda ku guuleysata ganacsigooda in lagu soo bandhigo websaydhka Semalt.
Qaar ka mid ah kiisaska macaamiisha waaweyn ee leh sheekooyinka guusha weyn leh ayaa lagu muujiyey hoosta sida lagu arkay websaydhka.
Semalt malahan xayiraad lacageed oo xaddidan, mana leh xayiraad luqadeed. Adeegyadeeda waxaa heli kara dhammaan daneynaya adduunka oo dhan. Xor baad u tahay inaad iska hubiso websaydhka rasmiga ah ee Semalt oo ah kiisaska macaamiisha oo guuleysta Semalt.com
Marka laga reebo kiisaska macmiilka oo muujinaya boqolkiiba kororka taraafikada ganacsigooda ay soo mareen ka dib faragalinta Semalt. Waxa kale oo jira markhaatiyaal macmiil aan la tirin karin oo macaamiisha la wadaagaya oraahdooda naxdinta leh ee ku saabsan yaababkii Semalt ku sameeyey ganacsigooda.
Kaliya maahan inaad ka hesho markhaatiyo muuqaal ah macaamiisha bogga Semalt, laakiin waxaad ku arki doontaa caddeyn qoraal ah oo leh qiimeynno aad u tiro badan oo ka imanaya Google iyo Facebook oo adeegsadayaasha isticmaala Semalt adduunka oo dhan.
Laga soo bilaabo Mareykanka ilaa Fiyatnaam, ilaa Irland, Semalt ma oga xuduudo. Waxa kaliya ee walaac laga qabaa waa in si joogto ah loogu keeno qanacsanaanta macaamiisheeda ballaaran iyo in ganacsigooda la dhigo meesha ugu sarreysa adeegyadeeda xirfadeed.
Waxaa jira marag-kac aad u badan oo aan lagu daalin karin qoraalkan. Si aad u fiiriso waxbadan fadlan booqo websaydhka rasmiga ah ee Semalt oo ka aqriso dib-u-eegista adeegyada Semalt markhaatiyada gacanta koowaad.
Hoos waxaa ku qoran cadeymo qoraal ah oo aad ka heli karto websaydhka Semalt:
Aad uga walwalsan tahay meesha aad joogto oo aad la yaabto haddii Semalt uu wax ka qaban karo la macaamilka waddan kale, si fiican u baqo in aadan Semalt daboolin, iyada oo aan loo eegeyn goobtaada.
Shaqaalaha Semalt waa xirfadlayaal iyo afaf badan. Waxay ku yaryihiin ku hadalka luqadaha caalamiga ah, sida, Ingiriiska, Faransiiska, Boortaqiiska, Turkiga, Talyaani iyo wixii la mid ah. Sidaa darteed ma aha inaad ka walwaleyso carqaladaha luqadeed markaad tixgelinayso inaad shaqaaleysiiso adeegyada Semalt ee ganacsigaaga ama boggaaga.
Ma ogtahay in sumcadda Semalt ay dhab ahaantii tahay Turtle?
Ma ogtahay in Turtle ay astaan qaali ah u tahay Semalt kaliya maahan astaanta wakaaladda laakiin sidoo kale wakaaladdu waxay leedahay xayawaan qani ah oo la yiraahdo Turbo oo ku nool dhammaan xafiisyada Semalt isla markaana waliba u shaqeeya sida wareysiga loo qoro ee ku sugan Turbo?
La kulan Turbo Ilaha
Marka laga soo tago adeegyada heerka sare ah ee ay hay'addu bixiso; kiisaska macaamiisha tirinta badan ee lagu daaweeyo wakaaladda iyo maragyada macaamiisha weyn ee ka yimid adduunka oo la wadaaga sheekooyinkooda guusha Semalt, waxaa jira weli wax badan oo intaas ka badan oo ku saabsan Semalt.
Semalt sida wakaaladdu u aaminsan tahay awoodda wax qorista oo uu leeyahay baloog aad u firfircoon si uu ula macaamilo macaamiisheeda iyo isticmaaleyaasheeda.
Semalt Blog wuxuu ku jiraa websaydhkiisa, wuxuuna leeyahay tiro badan oo qoraallo ah oo laxiriira meheradaha khadka tooska ah, aaladaha suuqgeynta internetka iyo beero kale oo laxiriira. Bogaggaan baloogyada ah waxaa qorey aqoonyahanno ku xeel dheer cilmiga, kuwaas oo diyaar u ah inay la wadaagaan aqoontooda, oo siiyaan aragtiyo faahfaahsan oo ku saabsan mowduucyada kala duwan ee la xiriira Suuqgeynta SEO.
Qaar ka mid ah baloogyada blogga ee aad ka heli doonto 'Semalt Blog' waxaa ka mid ah:
SEO vs PPC - Midkee ayaa loo isticmaali doonaa si loo kululeeyo Big?
Sida loo abuuro Bog Ganacsi Google oo Loogu Buro?
Qaababka Hadal-iyo-Run ee Lagu Soo Gudbiyo Degmooyinka Si Loogu Raadiyo Mashiinno | Semalt
18 Qalabka SEO ee Bilaashka ah ee Ugu Fiican ee Lagu Hagaajiyo Darajayntaada | Semalt
Maxaa ka dhigaya Profile-ka Hadalkiisa ee Isku-Darka ee Isku-Darka ee Isku-dheeli-tiran?
Kuwaani waa kuwa inbadan oo si fudud looga heli karo websaydhka. Akhrinta qoraalladaan waxay ku siin kartaa aragti qoto dheer iyo xeelado dheeri ah oo lagu hormariyo ganacsigaaga.
Sidoo kale waxaad ka heli kartaa la-talin SEO ah oo bilaash ah websaydhka Semalt. Wadatashiga ayaa loo sameeyay in lagu caawiyo dadka waqtiga hore, iyo sidoo kale macaamiisha duugga ah si loo ogaado arrimaha boggooda SEO iyo sidoo kale kor loogu qaado waxqabadka ganacsigooda.
Iyaga ayaa leh, macaamiisha waxay fikrad fiican ka heli karaan waxay u baahan yihiin, iyo nooca adeega ay tahay inay ka iibsadaan Semalt.
Dhamaan milkiilayaasha meheradda internetka, kuwa madaxa-bannaan, milkiileyaasha websaydhada iyo shakhsiyaadka kale ee adduunka oo dhan waxay raadinayaan xalal ku saabsan sidii loo kobcin lahaa boggooda internetka, Semalt waa habka loo maro. Waxay bixiyaan bogag internet fiicnaa oo shaqeynaya, iyagoo adeegsanaya qalab kala duwan oo suuqgeyn si kor loogu qaado aragtida iyo hawlgelinta. Semalt waa hay'ad suuq-geyn oo buuxa oo macaamiisheeda leh mudnaanta ugu sarreysa, oo leh guulo aan la tirin karin iyo guulo la muujiyey.